BLACK RABBIT BREEDS: TOP 5 WAKIILADA - XOOLAHA
Noocyada bakaylaha madow: sharaxaad iyo sawiro wakiilada ugu fiican
Xayawaanka gudaha ah waa xayawaan, qiimo leh maaha oo kaliya dharka, dufanka iyo hilibka, laakiin sidoo kale dabeecadda nabadda-jecel iyo dayactir sahlan, sidaas darteed xayawaankan kaliya laguma sara kicin beeraha ujeedooyinka warshadaha, laakiin sidoo kale kor loo qaado xayawaanka. Waxaa jira qiyaastii boqol nooc oo bakaylaha ah, laakiin madow waa kuwa ugu qiimaha badan. In this article waxaan tixgelinaynaa muuqaalada kala duwan, shuruucda daryeelka iyo quudinta, iyo sidoo kale sharaxaad ka mid ah noocyada ugu caansan madow ee bakaylaha.
Noocyada kala duwan ee bakaylaha madow
Caankii weynaa ee bakaylaha madow waxay keeneen mid taajir ah, qurux badan, midab madow. Dharka dhogorta ah ee laga sameeyay dhogorta dabiiciga ah ee madow wuxuu u baahan yahay baahida weyn ee soo saarayaasha wax soo saarka dhogorta (gaar ahaan dhirta timaha gaaban). Intaa waxaa dheer, jiilalka mugdiga ah ee bakaylaha cunuga ku kala duwan wax yar ka hor inta aan la barbar dhigo qaraabadooda iftiin ah.
Gaar ahaan qiimeeyn waa kuwa bakayle ah oo leh midab jaakad ah oo lebis ah. Muuqaalka ugu muhiimsan ee dhammaan madow (iyo shukulaatada iyo shukulaatada madow) ee jilicsan ee bakaylaha ayaa si gebi ah u madow iyo dhogorta, taas oo lagu qiimeeyo suuqyada marar badan ka badan cawska midabka midabka leh.
Ma taqaanaa? Midabka bakteeriyadu wuxuu ku xiran yahay gen ee uu ka adkaado inta lagu guda jiro garashada. Sidaa darteed, bakeylka midab madow ah wuxuu keenaa genotype "BB" - laba jinsi oo marba mid ah. Marka la barbardhigo: genotype "BA" (hidda-wata + geedka agouti) wuxuu loola jeedaa inay jiri doonaan madow madow oo ku yaal midabka dhogorta. Moodhadhka shukulaatada ee dhogorta waxaa lagu gaari karaa adigoo ku dhexjiraya genotype "bb" - laba hiddo oo xasaasi ah.
Noocyada caanka ah ee bakaylaha madow
Noocyada cagaarka ah ee madow iyo mugdiga ah ayaa ah tiro yar oo ka hooseeya iftiinka iftiinka - waxaa jira ilaa 20 nooc. Noocyada ugu fiican ee bakaylaha madow iyo dabeecadaha ayaa loo tixgelin doonaa si faahfaahsan.
Caanahan Tani waxay heshay magac caynkan oo kale ah - tani waxay noqon kartaa noocyada ugu weyn ee dhammaan bakaylaha mugdiga ah. Astaamaha calaamadaha dibadda ah:
miisaanka: dadka qaangaarka ah - laga bilaabo 4.5 illaa 8 kg, ragga ayaa xoogaa culus (ilaa 8.5 kg). Celceliska miisaanka dheddigga ayaa ku jira qiyaasta 5.5-6 kg;
dhererka jirka: 60-75 cm;
midabka: madow, lebis, marmarka qaarkood leh caleemo madow;
dhererka dharka: dhirta timaha gaaban, dhererka timaha ilaa 2 cm;
madaxa: waaweyn, oo leh dhagax dheer oo dherer dhexdhexaad ah;
indhaha: madow, wareegsan;
qoorta: gaaban, xoog leh, oo si wanaagsan loo dhisay;
laabta: si fiican u horumarsan, ballaaran. Guntanka xabadka ayaa ku jira celcelis ahaan 38-40 cm;
xejin: qaro, xoog leh, weyn (gaar ahaan raga);
okol: celcelis ahaan, 7-8 bakaylaha, oo ka duwan xaddiga (ilaa 3 bilood waxay miisaami karaan 2 kg);
da'da qoryaha: 8-14 bilood;
dhalidda hilibka: Cuntada saafiga ah ee hilibka gaaska hal sano jirka ah waa qiyaastii 4.5-6 kg.
Waa muhiim! Badeecada madow ee ku jirta ma kala duwan tahay tayada hilibka heerka sare - nooca bakaylaha waa la baddelaa marka hore oo dhan sababtoo ah dhogorta koowaad, hoos iyo maqaarka.
Noocyo cusub, oo la baddalay oo kaliya 1981. Bakteerkani weli ma ahan mid caan ku ah dhammaan wadamada yurub, sidaa daraadeed, ma aha mid aad u fudud in la helo cayayaanka noocaan ah ee beerista iyo iibinta. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtey saadaashii bakeylaha taranka, xaaladdan waxaa lagu hagaajin doonaa gudaha 5-7 sano, iyo jinsiga Black New Zealand ayaa loo qaybin doonaa dhammaan beeraha waaweyn ee yurub ee yaryar.
Hel barashada hilibka ugu fiican, qurxinta, dhogorta iyo hoos u-soocidda bakaylaha.
Noocyada kala duwan ee noocyadani waa:
miisaanka: illaa 5 kiilo oo ragga ragga ah iyo ilaa 4,5 dumarka;
dhererka jirka: ilaa 55 cm;
Midabka: Caleenta buluug-madow, iyada oo aan lahayn timo madow ama cas;
dhererka dharka: aan ka yarayn 4 cm, sidaas darteed, waxaa loola jeedaa dharka dheer. Waad ku mahadsan tahay dhererkan iyo cufnaanta timaha, New Zealand waxay u egtahay mid ka weyn kana culus miisaanka dhabta ah;
madaxa: weyn, culus. Qalku waa V-qaabeeya, ilaa 12 cm dheer;
indhaha: ballaaran, mugdi ah, wareeg ah (qadar yar);
qoorta: fudud, ballaaran;
laabta: dufan, ballaaran, xoog leh iyo fareem. Girth - illaa 33 cm;
xejin: qaro, xoog leh, leh suuf ballaaran;
okol: 5-6 bakaylaha;
da'da qoryaha: ugu yaraan 12 bilood;
dhalidda hilibka: hal sano oo cusub New Zealander waxay ka dhigeysaa 4.5 kg oo hilib saafi ah.
Tani waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah phlegmatic iyo degan dabiiciga ah ee bakaylaha yar. New Zealand waxay caan ku tahay ciladda cudurka - waxay u dulqaadanayaan heerkulka hoose iyo xaaladaha xun ee cimilada.
Tani waxay jirtaa qiyaas ahaan boqol sano jir - waxay u muuqataa in ay soo gooyeen beeraha Alaska iyo bakaylaha buluugga ah. Ma leh oo kaliya timo fiican, laakiin sidoo kale hilib nafaqo leh oo wanaagsan.
Ma taqaanaa? Bakeylka madow ee wiyisha waa mid la jilcay oo leh saamiga ugu fiican ee xuduudaha jidhka, tayada dhogorta iyo muruqyada la kobciyo. Calaamadaha xajmiga iyo xajmiga, "bisad" ee dhabarka. Waa jilicsanaanta madow ee Vienna taas oo inta badan ku guuleysatay tartamada tartanka tartanka.
Astaamaha calaamadaha noocyada kala duwan:
miisaanka: illaa 5.5 kg oo lab ah. Dumarka ayaa badanaa culeyskiisu yahay 4.5-5 kg;
dhererka jirka: 45-50 cm;
Midabka: dhogorta dharka madow ee madow oo leh shukumaan, dabayl qurux badan;
dhererka dharka: Timaha ilaa 2-2.5 cm (waxay khuseysaa shorthair);
madaxa: xoogaa yar oo isbarbardhigaya jidhka, culus. Dheguhu waa V-qaabeeya, dhererkoodu wuxuu kudhisan yahay celcelis 11-12 cm;
indhaha: foomka saxda ah, qadar kooban. Inta badan midab madow;
qoorta: oo si tabaruc leh loo muujiyo, si habsami leh u qulqulaya gadaasha, sameynta boodh qurux leh;
laabta: aad iyo aad u ballaaran, murqaha. Volume - 32-36 cm;
xejin: yar tahay, ballaaran oo xoog leh;
okol: 5-7 bakaylaha;
da'da qoryaha: 11-14 bilood;
dhalidda hilibka: qiyaastii 4-4.5 kg oo hilib saafi ah.
Nooca bakaylaha, waqtiyada Soofiyeetiga ah ee la soo dhaafay (qiyaastii 1942). Shuruudaha ugu muhiimsan ee ka soo baxa noocan ayaa ahaa iska caabin wanaagsan oo ku yimid heerkulka hooseeya iyo cudurrada qaarkood.
Baahida loo qabo furaha madow ee wakhtigaas ayaa waxaa keenay baahida weyn ee dharka iyo cinniga laga sameeyay foxka blackfoil, sidaa darteed, jareeraha gudaha ayaa la kulmay hawsha soo saarista midabka madow ee bakaylaha leh dhuuban, dhogor tayo sarre leh, oo aan luminayaan dhadhankiisa. Waxay suurtagal tahay in lagu xalliyo dhibaatadan adigoo ka gudbaya caleemaha White Giant, Flandre iyo Vienna Blue.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan xeerarka ilaalinta iyo quudinta bakaylaha ee midabka madow-madow.
Muuqaalka madow-brown ee bakaylaha waxay leedahay qaababka kala duwan:
miisaanka: ugu badnaan - illaa 7 kg. Celceliska miisaanka ayaa ku dhow 5,5 kg ragga iyo 4.5-5 kg ​​ee dheddigga;
dhererka jirka: 45-55 cm;
Midabka: madow oo leh xayawaanno bunni ah (waxay noqon karaan mid cad ama "loo qaybiyey" midabyo - tusaale ahaan, madaxa iyo laabta waa madow, jidhka iyo dabada waa bunni);
dhererka dharka: ilaa 3 cm (waxaa loola jeedaa jinsiyada leh dherer dhererka dhogorta). Dareerayaasha ayaa si aad ah u qarinaya - ilaa 23,000 koofiyadood halkii 1 cm ee maqaarka;
madaxa: awood, isugeyn jidhka. Qolalka dheer (ilaa 12 cm), istaagaan toosan;
indhaha: mugdi, ballaaran, waxaa laga yaabaa in la jeexay qafiif yar;
qoorta: ballaaran, yar yar, si tartiib ah u socodka jirka;
laabta: ballaaran, murqaha, waxay yeelan karaan demo dheeraad ah;
xejin: dheer, xoog leh, toosan. Muraayadaha waa kuwo ballaaran oo xoog leh;
okol: 5-8 bakaylaha;
da'da qoryaha: 10-13 bilood;
dhalidda hilibka: net ilaa 5.5 kg.
Sida caadiga ah, gadaashiisa iyo madaxa bakaylaha madow-bunka waxay leeyihiin midab khafiif ah oo madow, halka barafka iyo lugaha ay yihiin brown-brown. Noocani waa mid caan ku ah dhogorta tayada sare leh oo aad u fiican oo hoos u roon (waxaa jira qiyaastii 45 muraayadaha hoose ee dhoobada timaha).
Waa muhiim! Noocyada noocan oo kale ah bakteeriyada Wien Black iyo New Zealand waxay aad u qiimeeyaan midabkooda midabkooda. Mararka qaar wakiilo ka mid ah noocyadaas waxay ka yimaadaan timo guduudan oo casaan ah ama shukulaato, kuwaas oo beeralayda aan walwalka aheyn ay si fudud ugu riixaan cambeeri si ay qiimaha iyo qiimaha taranku hoos u dhacaan inta lagu jiro hirgelinta. Marka aad iibsanayso xayawaanka noocyadaas, si taxadar leh u baaro timaha xayawaanka: joogitaanka xitaa bararka balduud yar ayaa laga yaabaa inay tilmaamaan in xayawaankani ay ka soo baxeen timo midab khafiif ah. Haddii aad gasho xaalad noocaas ah, ha ka waaban inaad gasho oo aad dalbato qiimo hoose: Xusuuso in jiritaanka timaha iftiinka ama qaybaha timaha ee ku yaal wiishka kor ku xusan ay muujinayaan muuqaalka nadiifka ah ee noocyada ama jiritaanka cudurrada qaarkood.
Aragtid iyo muuqaal qurux badan, oo laga soo qaatay England dhammaadkii qarnigii XIX. Xayawaankan xaraashka ah iyo kuwa cayaaraha ah waxaa lagu xayeysiiyay by taranta weyn ee Belgian leh bakaylaha deegaanka duurjoogta. Wakiilada noocyada madow ee dabiiciga ah waxay leeyihiin sifooyinka soo socda:
miisaanka: ragga da'doodu u dhaxayso ilaa 3.5-4 kg (waxay khuseeyaan noocyada dhexdhexaadka ah). Dumarka waxay heli karaan miisaanka ilaa 3 kg;
dhererka jirka: 35-38 cm;
Midabka: madow, oo leh meelo dabiici ah oo ku yaal aagga caloosha, sanka, iyo dusha sare ee dhegaha. Isku dhafkan midabka mugdiga ah ee mugdiga leh ee casaanka ah wuxuu keenaa iftiinka iyo uureysiga noocaan;
dhererka dharka: aragtida shorthair. Dhererka timaha - illaa 2 cm;
madaxa: yar, isafgarad ahaan, saamiga saxda ah, wax yar ka yar. Dheguhu way kacsan yihiin, 10-11 cm dheer;
indhaha: yar yar, wareegsan, badanaa madow midabka;
qoorta: gaaban, si tartiib ah u qulqulaya gadaasha;
laabta: yar yar iyo cidhiidhi ah. Dhabarku waa qurux badan, oo leh qallal jilicsan;
xejin: xoog leh, xoog leh, si fiican loo dhigay. Sare waa jilicsan oo ballaaran;
okol: 4-5 bakaylaha ilmaha;
da'da qoryaha: aan ka yarayn 12 bilood;
dhalidda hilibka: ilaa 3 kg oo hilib saafi ah.
Wax badan ka baro bakaylaha madow.
Sida jilicsanaanta mugdiga ah, joogitaanka timaha hal nal ah ee bakaylka madow waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay guur guur.
Daryeel iyo quudinta
Daryeelka iyo dayactirka ee jiilaalka mugdiga ah ee bakaylaha ma aha mid ka duwan daryeelka ay ka mid yihiin jilicsanaanta midabka. Xeerarka aasaasiga ah ee ilaalinta nooc kasta oo bakaylaha ah waa nafaqo isku dheelitiran, habab maalinle ah iyo badbaadin laga bilaabo qoraalada.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida biyaha loo maro biyo, wixii dheeri ah ee aad u baahan tahay si aad u siiso, sida loo quudiyo bakaylaha, cawska si ay u quudiyaan bakaylaha, iyo sidoo kale ogow waxyaalaha fitamiinka ah ee aad u baahan tahay inaad bixiso bakaylaha.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira mowduucyada xayawaanka caanaha leh:
Cuntada Halkaas waxaa ka mid ah miro iyo khudrad qallalan (sidoo kale bocorka iyo miraha gabbaldayaha, lowska, fowdada iyo granules), iyo sidoo kale cawska, khudradda, miraha qaar (tufaaxa), iyo saamiga cuntooyinka qalalan / casiir leh waa inay noqdaan 1 qayb oo qalalan qalalan. 2-3 casiir leh.
Biyaha Xataa xitaa saacad kasta oo xayawaan ah si ay u noqoto cawska cusub iyo khudradda casiir leh, waxay si degdeg ah ugu baahan yihiin biyo caadi ah oo aan cabbin (oo aan qabow ahayn). Iyadoo la'aanta qoyaanka jidhka xayawaanka, geeddi-socodka aan dib-u-dhicin ayaa dhici doona kaas oo horseedi kara dhimashada bakayle. Intaa waxaa dheer, dhimashada dhalaanka cusub ama xayiraad ee xashiishadda haweeneyda (marka ay cunayso farcankiisa) waxay u dhacdaa si ba'an sababtoo ah biyo la'aanta jirka.
Qadarka cuntada. Bakayle waa xayawaan had iyo jeer cuno, maalin iyo habeenba. Dareemiskiisu waa mid aad u fiican, sidaas darteed cunto la'aantu wuxuu bilaabi doonaa inuu cuno agagaarka qoryaha, balaastik, kartoon iyo wax kasta oo ku soo baxa. Sababtaas awgeed xayawaankaas ayay u xoqeen, xayawaankani waxay u nugul yahiin. Qiyaastii 200 g oo hilib ah, 150 g oo ah hadhuudh iyo 0.4 kg oo ah cawska cusub ayaa loo tixgelinayaa in ay noqdaan maalin caadi ah oo loogu talagalay bakeyle saddex-kilo ah.
Daaqsiinta. Khamiirku wuxuu u baahan yahay dhaqdhaqaaq joogto ah, sidaas darteed waxay u baahan yihiin meel ku filan oo socod ah. Haddii xayawaanka guriga lagu calaashado, waa in loo oggolaadaa socodka ugu yaraan 20 daqiiqo maalin kasta.
Ilaalinta qabyo-qoraalka. Heerka iyo sameynta waa cadowga ugu weyn ee xayawaankani. Heerkulka ugu sarreeya xayawaanka waa + 25 ... +27 ° C, sidaas darteed maalmaha kulul waxaa lagama maarmaan ah in lagu siiyo xayawaan hoy ah oo ka soo baxa qorraxda tooska ah (dhisaan dhismo ama guri khaas ah). Qorshe, gaar ahaan xilliga qaboobaha, waxay u horseedi kartaa jirro iyo dhimasho xayawaanka - sidaas darteed u hagaa dildilaaca ku jira bakayle ama kaadin (ugu yaraan jiilaalka).
Video: wuxuu leeyahay muuqaalka taranta taranka Khamrigu waa xayawaan aad u qaali ah oo aan waxba galabsan oo si fiican ula shaqeeya dadka oo uma baahna qalab gaar ah ama xaaladaha "aqalka dhirta" ee dayactirka.
Caan ka mid ah caleemaha madow ee bakaylaha ayaa sabab u ah dabeecadooda, midab madow - waa noocyadaas kuwaas oo hela abaalmarinnada tartamada kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ay udub dhexaad u yihiin sida fudud sida noocyada iftiinka - xitaa beeraley novice ah ayaa maareyn kara arrintan.